२०७४–चुनाव – Page4– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
विश्वासकाे मत पाएनन् ओलीले, नयाँ सरकार गठनकाे रस्साकस्सी सुरु
काठमाडौं । सरकारकाे लागि १३६ मत पाउनु पर्नेमा ओलीले ९३ मत मात्र पाए । अविश्वासकाे पक्षमा १२४ मत खसेपछि ओली स्वतः पदमुक्त हुन पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त बन्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पुस्ट्याइँका लागि भएको मतदानमा हुन्छ भन्ने पक्षमा ९३ मत मात्रै पाए । […]
कमरेड नैनकला शाहीप्रति क्रान्तिकारी माओवादीद्वारा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले एक शोक वक्तव्य जारी गर्दै कमरेड नैनकला शाहीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । उहाँको ७५ वर्षको उमेरमा यही २०७८ बैशाख २६ गते राती १०ः२८ बजे उपचारको क्रममा निधन भएको थियो । दैलेख जिल्ला निवासी कमरेड नैनकला शाही मृगौलाको रोगले पीडित हुनुहुन्थ्यो । क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य […]
नि:शुल्क उपचार र राहतको व्यवस्था गर !
कोरोना संक्रमणले सिंगै देशलाई गाँज्न पुगेको छ । सरकारको गम्भिर लापरवाहीका कारण कोरोना भुसको आगो झै देशका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएपछि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । निषेधाज्ञा जारी गरेपछि दैनिक मजदुरी गरेर जीविका चलाउने श्रमिक तथा गरिब वर्ग नराम्रो मारमा परेको छ । उनीहरुका लागि रोगभन्दा ठूलो भोक बन्न पुगेको छ । […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Editorial, Flash
ओली सरकारको जनविरोधी स्वास्थ्य अपराध
काठमाडौं । नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)को दोस्रो लहरको संक्रमण भयावह रुपमा फैलिएको छ । पछिल्लो परीक्षण परिणामलाई हेर्ने हो भने सक्रिय संक्रमितको संख्या लाख नजिक पुगिसकेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि ४ हजार नाघ्न लागिसकेको छ । संक्रमण भुसको आगो झै फैलिदै गर्दा अस्पतालहरु संक्रमितहरुले भरिएका छन् । बेड नपाएर सडकमै उपचार गर्न […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Feature News, Flash, News
कोरोना संक्रमण तीव्र बनेपछि एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेको छ । सोमबार बिहान बसेको बोर्ड बैठकले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले एसईईको परीक्षा जेठ १३ गतेबाट र कक्षा १२ को परीक्षा जेठ २६ गतेबाट संचालन […]
ओलीले आज संसदबाट विश्वासको मत लिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज (सोमबार) नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदै छन् । ओलीले विभिन्न राजनीतिक उतारचढावबीच विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । आफ्नै पार्टीभित्रका नेपाल समुहको असहमतिका बाबजुद ओलीले विश्वासको मत लिन खोजे पनि अहिलेसम्मको सत्ता समीकरणलाई हेर्ने हो भने उनले विश्वासको मत पाउने देखिएको […]
दु:खद खबर:दैलेख कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहर तथा समाजसेवी स्वर्गीय हर्क शाहिकी धर्मपत्नीको निधन
वैशाख २७ काठमान्डौ । दैलेख कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहर तथा समाजसेवी स्वर्गीय हर्क शाहिकी धर्मपत्नी तथा देजमो नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दिपक शाहीको ममतामयी आमाको पाटन अस्पतालमा उपचारकाक्रममै आइतबार राती १०:१८ बजे निधन भएको छ । आमाको आकस्मिक निधनको खबरले सबैलाई दु:खीत तुल्याएको छ . यस दु:खद घडीमा आमाप्रती भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न र सोकाकुल परिबारमा […]
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) कालीकोट जिल्ला सचिव कर्णबहादुर वीसीको नेतृत्वमा कालीकोट वस्तीहरुमा भेटघाट, छलफल अभियान सञ्चालन गर्दै
वैशाख २५ कालिकोट नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले कोभिड १९लाई मध्यनजर गर्दै यतिवेला कालिकोटका वस्तिहरुमा मास्क, स्यानीटाइजर र प्राथमिक आत्मसुरक्षाका साथ जनताका माझमा शस्स्त्र जनविद्रोह मार्फत संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि संगठित हुन सम्पूर्ण क्रान्तिकारी शक्तिहरु खासगरी पूर्व जनमुक्ति सेना तथा माओवादीका क्रान्तिकारी नेता तथा समर्थकहरु, सहीद तथा वेपत्ता योद्धा परिवार र समर्थक शुभचिन्तकहरुका माझ भेटघाट, छलफल गर्दै […]
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन अभाव -१५ लाख जनसंख्यालाई दोस्रो डोजको चिन्ता, लगाउन नपाए के हुन्छ
२६ काठमाडौं गत फागुन २३ गते पछाडि दोस्रो प्राथमिकतामा परेर कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका करिब १५ लाख नागरिकलाई दोस्रो डोज खोपको चिन्ता बढेको छ । पहिलो खोप लगाएको ८ देखि १२ हप्ताभित्र दोस्रो डोज खोप लगाउनुपर्ने भएपनि खोपको व्यवस्था नहुँदा करिब १५ लाख जनसङ्ख्यालाई दोस्रो डोजको चिन्ता बढेको हो । यसअघि भारतबाट १० लाख डोज […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Flash, News, Photo Feature
पछिल्लो २४ घण्टामा ५३ जना संक्रमितको मृत्यु, थपिए ८ हजार ४१८ संक्रमित
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा ५३ जना कोरोना भाइरसका संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार याेसँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या तीन हजार ६३२ पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार १८ हजार ३०४ जनाको परीक्षण गर्दा आठ हजार ४१८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। १७ हजार ३१५ जनाको पीसीआर गर्दा ८ हजार २८७ र […]